Seller's Guide - BaganMart
BaganTrade ဆိုတာ ဘာလဲ?
Welcome BaganMart's Help Center
ရောင်းသူ လမ်းညွှန်(ဘယ်လို ရောင်းမလဲ?)
အဆင့်၄ ဆင့်ဖြင့် လွယ်ကူစွာရောင်းချနိုင်ပါသည်
Get Orders / Customers
BaganMart တွင် Facebook Account (သို့) Email Account တို့ဖြင့် Member ဝင်ပါ။ အသေးစိတ်ကို website အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်တို့ကို ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို များဖြင့် တင်ရပါမည်။ ဝယ်သူ အများစုသည် ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရာတွင် ထိုပစ္စည်း၏ ဓါတ်ပုံ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကုန်ပစ္စည်းအား Buyer များမှ စိတ်ဝင်စားပြီး ဝယ်ယူရန်အတွက် ကြည်လင်သန့်ရှင်း သပ်ရပ် သော ဓါတ်ပုံများကို ထည့်ပါ။
အဆင့်(၃)( Get Orders / Customerss)
Buyer များမှ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို နှစ်သက်ပြီဆိုပါက Message Box (သို့) SMS (သို့) Phone Call တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်လာပြီး ကုန်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ ၊ အရည်အသွေး၊ ထုတ်ပိုးမှု နှင့် အခြား သိလိုသည်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ သင့်ကုန်ပစ္စည်း၏ စျေးနှုန်းအတိအကျ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆက်သွယ်လာသောBuyer ထံသို့ ပြန်လည် Message ပြန် ပေးပို့ရပါမည်။ Online မှ တိုက်ရိုက် Order မှာပြီး Cash On Delivery ဖြင့် ငွေပေးချေသူများ ရှိမည်ဖြစ်သလို ၊ Online မှ Information သာကြည့်ပြီး လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဝယ်ယူသူများလည်း ရှိပါမည်။ ယခုကဲ့သို့ BaganMart.com ပေါ်မှာ တင်ရောင်းခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်း၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လုပ်ငန်းများရှင်များ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု သိရှိနိုင်ပြီး ၊ Customer များ ပိုမို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။